सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा महँगो जग्गा कैलालीमा, सस्तो अछाममा, हेर्नुस जग्गाको मूल्य कहाँ कति? :: BIZMANDU
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा महँगो जग्गा कैलालीमा, सस्तो अछाममा, हेर्नुस जग्गाको मूल्य कहाँ कति?
प्रकाशित मिति: Aug 8, 2017 11:13 AM
काठमाडौं।जग्गाको न्यून मूल्यांकन रोक्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन बढाएको छ।
लम्की बजार। तस्विर- पानोरामियो डट कम।
जग्गामा हुने राजस्व छली रोक्न सरकारले मूल्यांकन बढाएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका विभिन्न स्थानको जग्गाको मूल्यांकन बढिसकेका छन्।सुदुरपश्चिममा समेत जग्गाको मूल्यांकन २५ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।सुदुरपश्चिमको केन्द्रमा रहेको कैलालीको मूल्यांकन सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बढाइएको छ।सुदुरपश्चिममा सबैभन्दा महँगो जग्गा कैलालीकै बनेको छ।कैलालीमा सरकारी मूल्यांकनकै आधारमा कठ्ठाको ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा २५ प्रतिशतले जग्गाको मूल्याङ्कन बढाईएको छ। थापाले भने- धनगढी बाहेक अत्तरिया र घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि २५ प्रतिशतले मूल्याङ्कन बढाईएको छ।धनगढी उपमहानगरपालिकामा जग्गाको सरकारी मूल्य प्रति कठ्ठा ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गतवर्ष सम्म धनगढीको जग्गाको सर्वाधिक मूल्य ७१ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा थियो। धनगढी मूलसडकमा २० प्रतिशत सम्म मूल्य बढेपनि भित्री सडकहरुमा २५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि भएको थापाले बताए।
महेन्द्र राजमार्ग र महाकाली राजमार्ग एकअर्कामा काटिएको अत्तरियामा धनगढी भन्दा महँगो मूल्यांकन गरिएको छ। अत्तरियामा प्रतिकठ्ठा ९५ लाख रुपैयाँ सम्म मूल्यांकन गरिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकामा प्रति कठ्ठा ५० लाख रुपैयाँ सम्म मूल्यांकन गरिएको छ। यस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकामा राजमार्गसँग जोडिएका जग्गा ५५ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरिएको छ। टीकापुर नगरपालिकाभित्र भने प्रतिकठ्ठा ४० लाख रुपैयाँ मात्रै मूल्यांकन गरिएको छ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा यो वर्ष १५ प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्यांकन बढाईएको छ।
गतवर्ष ७१ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा रहेको महेन्द्रनगर बजारक्षेत्रमा यो बर्ष ८२ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा सम्म मूल्यांकन गरिएको छ। अन्य ठाउँमा भने सामान्य मूल्य बढाइएको छ।
डडेल्धुरामा रोपनीको ८० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ।
डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकामा मूल सडकले छोएको जग्गाको मूल्यांकनप्रति रोपनी ८० लाख रुपैयाँ सम्म गरिएको डडेल्धुरा मालपोत कार्यलयका प्रमुख प्रेम माझीले बताए।अमरगढी नगरपालिकामा अधिकांश जग्गाको मूल्यांकन रोपनीको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गरिएको छ। मूलसडकबाट दुईसय मिटरभित्रको जग्गा रोपनीको २२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ।
अन्य ठाउँमा भने बाटो नभएको जग्गा रोपनीको ४० हजार रुपैयाँदेखि डेढलाख रुपैयाँ सम्म मूल्यांकन गरिएको छ।
बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी बजारमा मूलसडकको दायाँबायाँ प्रतिरोपनी २३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ।
बुढीनन्दा नगरपालिकामा १० लाख रुपैयाँ प्रति रोपनी मूल्यांकन गरिएको छ। अन्य गाउँपालिकाका केन्द्रहरुमा भने प्रतिरोपनी ५० हजार देखि देखि डेढ/दुई लाख रुपैयाँ सम्म मात्र कायम गरिएको बाजुरा मालपोत कार्यालयका प्रमुख हिरालाल गिरीले बताए।
बैतडी सदरमुकाम दशरथचन्द नगरपालिकामा रोपनीको २० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ।
पाटन नगरपालिकामा पनि २० लाख रुपैयाँनै मूल्यांकन कायम गरिएको बैतडी मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोविन्द लेखकले बताए। अन्य गाउँपालिकामा भने ५० देखि ६० हजार रुपैयाँदेखि राम्रो खेतीयोग्य जमिन डेढलाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी सम्म मूल्यांकन कायम गरिएको लेखकले बताए।
अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा व्यावसायीक जग्गाको मूल्यांकन १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी कायम गरिएको छ।
बजार क्षेत्रभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनको पनि १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको अछाम मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बोहोराले बताए। खेतीयोग्य जमीन भने रोपनीको ४० हजार देखि एक लाख रुपैयाँ मूल्यांकन कायम गरिएको छ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा महँगो जग्गा कैलालीमा, सस्तो अछाममा, हेर्नुस जग्गाको मूल्य कहाँ कति? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।